डा. भक्तमान अपहरण प्रकरणका आरोपित गौतम योञ्जन पक्राउ – NawalpurTimes.com
डा. भक्तमान अपहरण प्रकरणका आरोपित गौतम योञ्जन पक्राउ
प्रकाशित : २०७६ पुष ३ गते २०:५८
पुस ३, काठमाडौं । नौं वर्षअघि भएको विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरका कार्यकारी निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणमा संलग्न भएको आरोप लागेका गौतम योञ्जन पक्राउ परेका छन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले योञ्जनलाई महाराजगञ्ज क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीको उच्च स्रोतले तायो । उनलाई जिल्ला अदालत, चितवनले २३ जेठ २०६९ सालमा सफाइ दिएको थियो । तर, उच्च अदालत, पाटनको हेटौंडा इजलासले दोषी ठहर गरेको थियो ।
अहिले त्यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
४ जेठ २०६७ मा भिमसेन पण्डित, रोहित पालिवाल लगायतको समूहले डा. श्रेष्ठको अपहरण गरेको थियो । अपहरणपछि काठमाडौंको विभिन्न ठाउँमा उनलाई बन्धक बनाएर राखिएको थियो । योञ्जनको बुढानिलकण्ठस्थित फार्म हाउसमा पनि श्रेष्ठलाई केही दिन राखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
बन्धक बनाएको १९ दिनपछि भारत, उत्तरप्रदेशको कानपुर नजिकै अपहरणकारीलाई तीन किलो ६ सय ग्राम सुन फिरौती बुझाएपछि उनी छाडिएका थिए ।
प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मानिएका पण्डित भने अझै फरार छन् । उनी भारतका विभिन्न शहरमा लुकेर बसेको आशंका गरिन्छ ।
अनुसन्धान अधिकृतहरु योञ्जनलाई पण्डित निकटस्थ व्यक्ति मान्छन् । अपहरणपछि योञ्जन भागेर सिक्किम पुगेका थिए ।
हालै उनी अमेरिका छिर्ने तयारीमा थिए । तर, अमेरिकी दूतवासबाटै सूचना प्राप्त भएपछि पक्राउ परेको स्रोत बताउँछ ।
रोहित र भीमसेन समूहले त्यसवेला भीओआईपी कलबाइपास प्रयोग गरेर परिवारसँग सम्पर्क गरेका थिए, जसका कारण प्रहरीले फोन कहाँबाट आयो भन्ने अत्तोपत्तो पाउन सकेको थिएन ।
पछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले पालिवाललाई भने भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कानपुरमा रहेको घरबाटै पक्राउ गरेको थियो । त्यसक्रममा फिरौती लिन आउने व्यक्ति पनि रोहित नै भएको खुलेको थियो ।
किन पक्राउ पर्दैनन् पण्डित ?
प्रहरीका विभिन्न निकायले मुख्य आरोपित पण्डितको खोजी जारी राखे पनि अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । पालिवाल पक्राउ पर्दा उनी पनि भारतमै रहेको बताइन्थ्यो ।
पालिवाल पक्राउ पर्नुअघिसम्म उनलाई भारतीय नागरिक मानिएको थियो । तर, पछि उनी नुवाकोटमा भएको खुलेको थियो । उनको परिवारका सदस्य अझै त्यहीँ छन् ।
तर, परिवारसँग पनि सम्पर्कबाट टाढै रहेका कारण उनलाई प्रहरीले समात्न सकेको थिएन । उनी मोबाइल वा सञ्चारको अन्य साधानबाट टाढै बस्छन् । त्यसैले प्राविधिक पाटोबाट उनीसम्म पुग्ने ‘क्लू’ प्रहरीले पाउने सकेको छैन ।
त्यसो त एक वर्षअघि उनी नेपाल छिरेको प्रहरीको इन्टलिजेन्सले पत्ता लगाएको थियो । तर, ढिला गरी सूचना प्राप्त हुँदा पक्राउ गर्न असफल रह्यो ।
पण्डितको समूहले १५ भदौ ०६४ मा व्यवसायी सचिन गुप्तामाथि गोली प्रहार गरी अपहरण प्रयास गरेको थियो भने २ पुस ०६४ मा विनोद शर्माको अपहरण गरी फिरौती असुली गरेको थियो ।
२२ पुस ०६४ मा ओमकार भट्टचनलाई पनि यही समूहको निशानामा परेको थियो ।